တင်းကြပ်သော မိဘများအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
အောကျတိုဘာ ၉, ၂၀၁၇ - ၉:၂၅ ညနေ News Code : 859332 Source : ABNA Link:
ဤကဲ့သို့မိဘများသည် မိမိတို့၏ ချစ်လှစွာသော သားသမီးများ၏ နောင်ရေး အနာဂတ်ကို ပြင်းထန်စွာ အန္တရာယ်တွင်းသို့ ပို့ခြင်းမည်လေ၏။
မြောက်များစွာသော ခေတ်စကားအရ တစ်ကိုယ်ကောင်းသမား မိဘ များသည် မိမိတို့၏ လူပျို၊ အပျို လူငယ်ဘ၀၌ မြောက်များစွာသော၊ များပြား လှသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ၊ ၀မ်းနည်းမှုများ၊ အကြပ်အတည်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့၍ အတွေ့အကြုံရှိနေပြီး ဖြစ်သော်လည်း (မိမိတို့၏) လူငယ် လူရွယ်တို့ နှင့် နှလုံးသားမှ တောင်းဆိုနေသည့် လိင်ကိစ္စ၊ ကာမကိစ္စ တည်း ဟူသော မုန်တိုင်းကို မှန်ကန်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ငြိမ်းအောင်မပြုနိုင် ကြပေ။
မိမိတို့ ၏ သားသမီးများ၏ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စနှင့် ဆက်နွယ်ပြီး အေးလွန်းသည် (သို့မဟုတ်) အလွန်တရာ တင်းကြပ်လွန်းလှပေသည်။
ဤအေးလွန်းမှုနှင့် တင်းကြပ်လွန်းမှု နှစ်ခုစလုံးသည် အခြေခံမှာ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံ တစ်ခုတည်းဖြစ်ပေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မည်မျှထိ ဤဝေဒနာရှင်များခံယူသည်ဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ တစ်နှစ်၊ ငါးနှစ်အထိ ကြာမြင့်သွားလျှင်လည်း ၄င်းတို့၏အမြင်၌ သာမန်ကိစ္စလေးနှင့် အချိန် အနည်းလေးဟု သတ်မှတ်ကြလေသည်။
“ ကောင်းပြီး . . . ဒီနှစ်မဆောင်ဖြစ်လည်း အင်ရှာအလ္လာဟ့် နောက်နှစ်ပေါ့ . . . ” သို့မဟုတ် အခုမဆောင်ဖြစ်တော့လည်း နောက်နှစ် အနည်းငယ် အတွင်းပေါ့ အခုထိ အချိန်ရှိသေးပါတယ်လို့ . . . ဆိုတတ် ကြလေသည်။
ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် လူငယ်လူပျို အပျိုဘ၀၏ အရေးကြီးအချိန်၌ တစ်နှစ်နောက်ကျဖို့မဆိုထားလျှင် တစ်လနောက်ကျလျှင်ပင်(သို့မဟုတ်)ရက် အနည်းငယ် နောက်ကျလျှင်ပင် လူငယ်လူရွယ်၊အပျိုလူပျို ဘ၀၏ရလာဒ်ကို ပြောင်းလဲပစ်နှိုင်ကြောင်း မေ့လျော့နေကြလေသည်။
ဤကဲ့သို့သောမိဘများသည် အဘယ်ကြောင့် မိမိတို့၏ အတိတ်က လူပျိုအပျိုဘ၀များကို မေ့သွားကြမလဲမသိပေ။
အဘယ်အတွက်ကြောင့် မိမိတို့၏ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ မရောက် ခင်က လူပျိုအပျိုဘ၀၏မုန်တိုင်းများ၊ တက်ကြွမှုများကို အလျှင်အမြန် မေ့သွားကြရပါသနည်း?
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မိမိတို့၏လူငယ်၊လူရွယ်၊အပျို၊လူပျိုများ ၏နေရာတွင် အစားထိုး၍ကိုယ်ချင်းမစာကြပါသနည်း?
အမှန်တကယ် မိမိတို့၏ လူငယ်၊လူရွယ်၊ အပျို၊လူပျိုဘ၀ များ၏ ကိစ္စ(အိမ်ထောင်)နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သွေးအေးနေခြင်းသည် အလွန်တရာ အန္တရာယ်ကြီးလှပေသည်။ တစ်ခါတစ်လေ မကြုံခြင်းသည် အခြေအနေများ နှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ရူးသွပ်သည်အထိ ဖြစ်တတ်ရလေသည်။
လူငယ်လူရွယ်များမှ မိဘဆွေမျိုးမိသားစုမှ ထွက်ပြေးကြခြင်းများ၊ ကိုယ်တိုင်အဆုံးစီရင်ကြခြင်းများ၊ လမ်းလွှဲလမ်းမှားသွားကြမှုများ၊ ရောဂါ ဝေဒနာရှင်းများ ဖြစ်ရမှုများစသည်ဖြင့် ဖြစ်ပွားရသည့် အခြေခံအကြောင်း အရင်းများမှ တစ်ခုမှာ (အထက်ဖော်ပြပါ) သဘာဝတရား၊ အမှန်တရားကို အလေးမထား ဂရုမပြုမှုကြောင့်ပင်တည်း။
အကယ်၍ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော် ဆွေးနွေးတင်ဆက်မည့် ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာသည် လူငယ်လူရွယ်များ၏ သီလ သမာဓိရှိခြင်း၊ သန့်ပြန့် သန့်စင်သည့် စာရိတ္တပိုင်ရှင်များဖြစ်ခြင်း၊ အီမာန်ရှိပြစားခြင်းတို့ဖြစ် မည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တင်ပြမှုသည် ရုတ်တရက် ၄င်းအကြောင်းကို ပို၍တင် ပြသည် မည်သွားချေမည်။
မိဘနှစ်ပါးဖက်မှ အလွယ်မြင်ခြင်း၊ ပေါ့လျော့၊ ဂရုမပြုခြင်းသည် အောက်ဖော်ပြထားသည့် လူငယ်လူရွယ်များ အတွက် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှု ပြုခြင်းထက် ပိုရာရောက်သွားပေမည်။
အမှန်တရားကို သိမြင်ခြင်း၊ အစစ်အမှန်ကို သိမြင်ခြင်းနှင့် ဝေးသွား လေသည်။
ပြီးနောက် ခွင့်လွှတ်တတ်ခြင်း၊ နားလည်ပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ဤလိုအပ်ဆန္ဒများ အားလုံးအသွင်နှင့် ဆွေးနွေးရမည့် ခေါင်းစဉ်များအဖြစ် အခြေခံဖြစ်လာပေသည်။ ၄င်းအရာ၏ ဆန့်ကျင်ဖက် အနေအထားအဖြစ် အကယ်၍ မနုဿ၊ ပုထုဇဉ် လူသားသည် အရာ တစ်ခုခုကို အရေးမပါ၊ အရေးမကြီးဟုခံစား၊ ခံယူမည်ဆိုလျှင် ထိုအရာသည် လူသားအား အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းကို ကြိုက်သူ၊ အတင်းအကြပ် လုပ်သူအဖြစ်သို့ ပို့လိုက်လေသည်။ ပြီးနောက် ၄င်းအရာကို နှစ်သက်ခြင်းမှ ရှောင်လာလေသည်။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အချို့အတင်းအကြပ်ကြိုက်သူ၊ သံသယဖြစ်သူ အချို့သည် ကားဝယ်ယူသည့် အချိန် ယုတ်စွအဆုံး ထိုကား၏ အနံကိုပင် ရှူကြသည်ဟု ဆောင်ပါးတစ်ခု၌ ဖတ်ရလေသည်။
အသား (သို့) ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ၀ယ်ချိန် (ပုပ်မပုပ်) အနံ့ခံ၍ ၀ယ်ရသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်လေသည်။
ဤကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကားဝယ်ချိန်တောင် အနံခံကြသေး လျှင် မိမိခေါင်းကိုသုံးကြလျှင် မိမိတို့၏ သားသမီးများအတွက် အိမ်ထောင် ဖက်ရွေးချယ်ချိန်၌ ဘာတွေများလုပ်ကြမည်နည်း?
ဤကဲ့သို့သော် သံသ(ကြီးသူ) မိဘများသည် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ရွှံ့ထဲလဲချကြပြီး လုံးဝ (မိမိရွှံ့ထဲမှာ ရှိကြောင်း) ခံစားမှု မရှိကြောင်း အမြောက်အများ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ၄င်းတို့၏ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ဤသို့ဖြစ်ပေမည်။ အကြောင်းမှာ ကောက်ကျစ်ဖြားယောင်းသွေးဆောင်သူများ၊ ကိုယ့်ကို အထင်ကြီးအောင်နေကြသူများသည် (မိမိတို့၏) မကောင်းမှု ကောင်ကျစ်မှု ကျော့ကွင်း နှင့် မြှောက်ပင့်မှု စသည်တို့ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို သာယာစိမ်းလန်း စိုပြေသည့် ခြံတွင်ရှိနေသူအဖြစ် သံသယရှိသူများကိုပြသပြီး ၄င်းတို့၏ နှလုံးသား၌ နေရာယူတတ်ကြလေသည်။
ဤကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်သည် လူရိုးလူကောင်းတစ်ယောက်၊ သာမန် လူတစ်ယောက်လုပ်ဖို့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ချေ။ မည်သူ့ကိုမျှ ဤကဲ့သို့ မကောင်းသည့် နည်းစနစ်ကို သုံးပြီး စွဲဆောင်မှာ လုံးဝမဟုတ်ချေ။
အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရာ၌ လုံဝအသေအချာ ဂရုတစိုက်ရွေးချယ် ရမည်ဆိုတာမှန်ပါတယ် …..
အမှန်တကယ် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများနှင့် တာဝန် ၀တ္တရားများသည် မိဘများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ လူငယ်လူရွယ် အရွယ်ရောက် သားသမီးများ၏ လိင်ကာမအရသာ ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်မှု၊ တက်ကြွမှု၏ အခြေအနေမှန်ကို ကောင်းကောင်းမှန်မှန် သိထားသော်လည်း တမင်တကာ မေ့လျော့နေရသည့် အဖြစ်မျိုး ဖြစ်သွားရအောင် တွန်းပို့လေသည်။
ပြီးနောက် ၄င်း (မိဘများကို) အခု မိမိတို့ထံ၌ အချိန်ရှိသေးသည် ဆိုသော ယုံကြည်မှုကို ဖြစ်ထွန်းစေလေသည်။ ၄င်းတို့အနေဖြင့် ပြောကြ၊ ဆိုကြလေသည်။
ဒီလောက်အလျှင်အမြန်ကြီး လုပ်ဖို့ ဘာအရေးကြီးနေရတာလဲ …..!
အခုထိ ပါးစပ်မှ (အမေ) နို့ အနံ့ မပျောက်သေးဘူးလေ …..!
အခုထိ ကလေးဘဲရှိသေးတယ်လေ …..၊ ကလေးတွေအတွက် မင်္ဂလာ ကိစ္စဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲဗျာ …..! အခု ….. အခု …..
သို့သော် ဤ “အခု” “အခု” များသည် အန္တရာယ်ရလာဒ် အဖြစ်သို့ ရောက်တတ်ပြီး၊ မိဘနှစ်ပါး၏ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး၊ လက်လွတ်ရသည့် အခြေအနေသို့ရောက်တတ်ပေသည်။ အစားပြန်ထိုးလို့မရသည့် လမ်းအထိ ရောက်သည်အခါလည်း ဖြစ်တတ်လေသည်။
မိမိတို့၏ လူငယ်လူရွယ်များအတွက် ဘ၀ကြင်ဖော်ရွေးချယ်ရာ၌ မိဘများအနေဖြင့် အလွန်တရာအတင်းအကြပ်နည်းကို သုံးကြလေသည်။ မြောက်များစွာသော အခြေမဲ့စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လူငယ်လူရွယ်များ၏ မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စအတွက် သတ်မှတ်ကြလေသည်။
ယုတ်စွအဆုံး သံသယဆိုသည့် နယ်နမိတ်အထိ ရောက်အောင် ဖြစ်သွား ကြလေသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဤအကြောင်းတရားများ၊ အကြောင်းခံများ ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၏ အရေးပါ အရေးကြီးခြင်းဆိုသည့် ခံစားမှု ပျောက်သွားရလေသည်။
အကြောင်းမှာ မနုဿပုထုဇဉ်လူသားသည် အမြဲတမ်းသဘာဝ တရားအရ နေထိုင်ပြီး အကယ်၍အရာတစ်ခုခုကို အရေးကြီး၊ အရေးပါ သည် ဟုခံစား ခံယူ လျှင် ၄င်းအတွက် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း များကို နည်းသည်ထက်နည်းအောင်၊ လျော့သည်ထက်လျော့၊ ပေါ့သည်ထက်ပေါ့ အောင်လုပ်လေသည်။ အကြောင်းသည်ကား ဘ၀ကြင်ဖက်ရွေးချယ်မှု ကိစ္စ သည် ဘ၀ တစ်ခုလုံးနှင့် သက်ဆိုင်နေပြီး၊ အကျီတစ်ထည်၊ အ၀တ်တစ်ခု ဥပမာ ၀ယ်ပြီး ၀တ်ပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်လို့ ရသည့် အရာကိစ္စမဟုတ်ချေ။
သို့သော်လည်း “အသေးစိတ်ဂရုပြုမှု” နှင့် “တင်းကြပ်ခြင်း” “သံသယဖြစ်ခြင်း” တို့အကြား အများကြီး ကွာခြားမှုရှိလေသည်။
ဤ သို့အားဖြင့် အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ အသင့်အတွက် သင့်တင့်၊ လျှောက်ပတ်သည့် ဘ၀ကြင်ဖော်ဖြစ်မည်၊ ပြီးနောက် သတင်းရှိသူ (အတွင်းသိသူ) များစုံစမ်းချက်သည်လည်းပဲ ထောက်ခံနေမည်ဆိုလျှင် (ဤကဲ့သို့သောမိန်းကလေး) အား သံသယ၊ ဒွိဟမရှိဘဲ မလွဲမသွေ လက်ခံရ ပေမည်။ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသည့် မြတ်အလ္လာဟ်၏ အကူအညီ အဖေးအမကို မျှော်ကိုးရပေမည်။ ရလာဒ်ကောင်းထွက်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်စိတ်ချရပေမည်။
အစ္စလာမ် သာသနာတော်၏ အဆိုအမိန့်များ၊ အသိဥာဏ် ဦးနှောက်နှင့် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သည့် လေ့လာသူများ (ပညာရှင်များ) အမြောက်အများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ သားသမီးများအတွက် အိမ်ထောင်ပြု ပေးရေး ကိစ္စကို အလျင်တလို၊ အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ပေးရေး၊ အိမ်ထောင် ရေးကိစ္စကို သွေးအေးအေးမလုပ်ကြရန် (အချိန်မဆွဲရန်) အခက်အခဲများဖြင့် ထွက်ပေါ်လာမည့် ရလာဒ်အန္တာရာယ်ကို သာမန်ရိုးရိုးလေးဟု မသတ်မှတ်ရန်၊ မိမိတို့ချစ်လှရသော လူငယ်လူရွယ်များ၏ အနာဂတ်ကို အန္တရာယ်တွင်းသို့ အရောက်မပို့မိစေရန် မိဘတိုင်းကို ဆုံးမထားပေသည်။
လူငယ်လူရွယ်များ၏ ကာမတက်မက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဂ၏ အင်အားသည် အလွန်တရာ ကြီးမားပြီး ဤကိစ္စအတွက် ဂရုမပြုမှု (မထီမဲ့မြင်ပြုမှု) ပြုခဲ့မည်ဆိုလျှင် အလွန်တရာကြီးမားသည့် အန္တာရာယ် တစ်ခုခု နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မလွဲမသွေ အသိရှိရပေသည်။ မမေ့သင့်ချေ။
လိင်ရာဂ၊ ကာမရာဂ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်သွားခဲ့သည့် အန္တရာယ် များသည် မည်သည့် အန္တရာယ်နှင့်မျှ မတူကြောင်း၊ လူသားအားလုံး၏ သမိုင်း စာမျက်နှာနှင့် မနုဿလူသား၏ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တွေ့ကြုံမှုများသည် အားလုံး သက်သေထွက်ဆိုနေပေသည်။ မုချဧကန် ဤကိစ္စနှင့်ပြဿနာတိုင်း အရေး ကြီးသည့် ပြဿနာဖြစ်ပြီး အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်။